GSO ဥက္ကChairman္ဌ Adnan Ünverdi၏ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်အကဲဖြတ်မှု RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး27 GaziantepGSO ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Adnan Ünverdi
13 / 01 / 2020 27 Gaziantep, အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မော်တော်ယာဉ်, တူရကီ
gso ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကchairman္ဌ adnan unverdiden ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
GSO ဥက္ကPresident္ဌ Adnan Ünverdiသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းကားနှင့်သွားလာမှုအတိုင်းအတာအတွင်းအမျိုးသားနှင့်ပြည်တွင်းနည်းပညာသည်အဓိကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုသူကပြောသည်။
အမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံနည်းပညာကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအခုအဓိကအလှညျ့အပွောငျးကပြောသည်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံကားတစ်စီးနှင့်အတူဝုဏ် (TOGG) ရက်နေ့တွင်, တူရကီကုန်သည်များနှင့် Stock Exchange များသမဂ္ဂ (TOBB) တူရကီရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း Group မှနျလှုံ့ဆျော၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Gaziantep ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (GSO) ကဘုတ်အဖွဲ့Ünverdi Adnan ဥက္ကဋ္ဌ။
Gebze ရှိ Bilisim ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ကျင်းပသော Yolculuk ခရီးသွားခြင်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးအတွက်သူတို့အလွန်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းÜnverdiကပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏သမ္မတနိုင်ငံ၏ပထမနှစ်များတွင်လေယာဉ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စတင်ခဲ့သောလုပ်ငန်းများသည်အမြဲတမ်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သော်လည်းကံမကောင်းစွာကျရှုံးခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးကားများအပြီး ၅၈ နှစ်ကြာပြီးနောက်၌ဤတောင့်တမှုသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်သည်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ with နှင့်အလွန်မြင့်မားသောနည်းပညာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကကဏ္ with တို့နှင့်အတူအလွန်အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုအချိန်တိုအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ပြည်တွင်းကားနှင့်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ နည်းပညာနှင့်နဖူးချွေးများကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ ဒီတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာနည်းပညာမှာသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေရပါပြီ။ ”
TOGG မှထုတ်လုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းကားသည်အလွန်ခက်ခဲသောကာလတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးဆက်သစ်ကားတစ်စီးအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုနောက်ကွယ်မှပင်စတင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ခြေတစ်လှမ်းကိုပင်ရှေ့သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်များလွှမ်းမိုးထားသည့်ကဏ္sectorတွင်ကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလည်ပတ်နေသည့်မော်တော်ကားနည်းပညာများဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဆီလီကွန်နှင့် Semi-Electric မော်ဒယ်များကိုယ်အလေးချိန်တက်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သည်လျှပ်စစ်ကဏ္ car နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ပြောဆိုချက်ကိုပြသခဲ့သည်။ တူရကီမျှော်လင့်ချက်အတွက် high-tech မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကားများ၏ဤမျိုးဆက်သစ်လည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တွေနဲ့, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
TOBB နိုင်ငံတော်သမ္မတတော်လ်ရီဖက်Hisarcıklıoğlu "တူရကီရဲ့ပြည်တွင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကားများပဲကားတွေလုပ်မပေးပါ။ တူရကီရဲ့ကားရုံကားတစ်စီးထက်ပိုပါတယ်။ တူရကီရဲ့မော်တော်ယာဉ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကူးအပြောင်း။ ဒါဟာကားတစ်စီးနှင့် ပတ်သက်. တူရကီရဲ့ TOBB သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့မှတ်ချက်တွေဤဖြစ်စဉ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် "စကားÜnverdiဆင်တူ" အသစ်တစ်ခုကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောအသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ် ..
ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Gaziantep ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသွင်ပြောင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီး, ဤအခြေအနေတွင်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္Ünverdiဖော်ပြအတွက်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းများယူ။ , ဒေသအားလုံးမြို့များ၏အနေအထားအတွက်မြို့အဖြစ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်မော်တော်ယာဉ်ကဏ္otiveသို့ဝင်ရန်အဆင်သင့်။
ပထမဦးဆုံးအမစ္စတာနိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်, TOGG နှင့် TOBB ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာတော်လ်ရီဖက်Hisarcıklıoğlu, တူရကီမှာဒီဇိုင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများ, နှစ်သိမ့်နှင့်အမြင့်မားသောနည်းပညာနှင့်ပြည့်စုံမျက်စိ '' ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနှင့်ဆန္ဒဖို့တူရကီရဲ့ကားကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မင်္ဂလာ Adnan Ünverdiကြောင်း, " အင်ဂျင်နီယာအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ချွေးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Kardemir ဥက္ကဋ္ဌ 81 ကနေ Extract လုပ်ပါ။ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို Message
Erciyes Inc က ဥက္ကဋ္ဌ Murat Cahit Cıngı
ဘုတ်အဖွဲ့၏ESİADဥက္ကဋ္ဌ, ထိုမီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Said မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်
Metin Kalkavan၊ EAMEAK ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကPresident္ဌနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊
TÜVASAŞဥက္ကဋ္ဌ Erol İinal: တစ်ခုကချွေ Power'll မှတ်ပုံတင်မည်
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒီမိုကရေစီအစပျိုးမှုဆန့်ကျင် DTD ကြိုးပမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း
ဥက္ကဋ္ဌ Polat လမ်းကိုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, ထိုစုပေါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုသဘောတူညီချက်အခွန်ပြန်အမ်း Be သင့်သ
inetin Ateş၊ Noya အုပ်စု arazi ဥက္ကChairman္ဌ arazi
အခွန်ကောက်ခံမှု၏သမ္မတ, Kardemir Asar ။ ဥက္ကဋ္ဌ Gulec လည်ပတ်သူများ
ETD ဥက္ကChairman္ဌ Burak Kuyan ဖြစ်လာသည်
Gebze မြို့တော်ဝန် Adnan Köşkerကရာစုနှစ်၏စီမံကိန်းဖြစ်သော Marmaray ကို Gebze မြို့မှထွက်ခွာကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Make Erkan တောင်တန်းနှင်းလျှောစီး၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့စုပ်ယူ
Kayaş - Irmak - Kırıkkale - inketinkaya Electrification Project İhale
စက်မှုလုပ်ငန်း၏ Gaziantep ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
အရူးစီမံကိန်းများအတွက်ဘီလီယံလီရာ ၃၂၀ ကုန်ကျသည်